Etu ị ga - esi họta ezigbo ihe ị ga - eji - amata ihe eji amata ihe eji amata ihe?
1. Ebumnuche na njirimara nke ịcha ọnwụ? Mpepu ọnwụ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị ọkpụkpọ ihe nlere akwụkwọ ga-akwadebe. Matchacha ihe a bụ otu n’ime ngwa ọrụ eji egwu akwụkwọ ga-akwadebe: a. Matgba osisi ahụ ga-echebe agụba ma mee ka ndụ ọrụ nke ndụdụ ahụ gbasaa; b. Ndị cutti ...
On ọwa nkwalite na ika ụlọ nke sọọsọ ụlọ ọrụ na China
Mmekọrịta dị n'etiti onye nrụpụta na onye na-ere ahịa na-anọ na mmekọrịta azụmahịa dị mfe, ndị otu abụọ ahụ enweghịkwa mmekọrịta na mmekọrịta dị elu na mmekọrịta. N'ihi nke a, ejikọtaghị akụ nke abụọ ahụ na ebumnuche nke otu ụdị na ahịa enweghị ike b ...
128th Canton Fair 10.15 ~ 10.24 Mmadụ Bịa ileta ụlọ ndò anyị: 1.2M15-16 na ahịrị
Ezigbo ndị ahịa, n'ihi mmetụta nke okpueze pneumonia ọhụrụ na ụwa n'afọ a, afọ Canton Fair nke afọ a emeela site na offline na ntanetị. Ihe ngosi 128th nke Canton amalitela, oge ijide ya bụkwa site na Ọktọba 15 ruo Ọktọba 24. Ugbu a, a na-akpọ gị oku ikiri o ...